Abakhiqizi nabathengisi be-UV germicidal China UV isibulala-magciwane isibani Factory
Isibani se-UV sokubulala amagciwane
Isibhedlela esiphathwayo ...
Umklamo omusha 35W UV magciwane ...
36W Germicidal UV ukukhanya dis ...
36W ephathekayo 254nm Ozone UV ...
Isibani senzalo ephathekayo ye-germicidal ultraviolet light
Isibani se-Ultraviolet ozala inzalo esine-253.7nm UV singaqeda igciwane (Covid-19) ngokushesha, futhi singaqeda amabhaktheriya nezibungu, ephephile futhi elula, sikulethela impilo enempilo.
Thina baseKanfur senza amalambu e-UVC okuthuthwa kwendle amakamelo amakhulu, amakamelo amancane nezindawo. Phila impilo ngokulawulwa kwendle. Imikhiqizo ye-UVC yamaGermicidal yabantu namabhizinisi ngokufanayo.
Isibani sokubulala amagciwane isibhedlela isibani se-Ultraviolet germicidal
I-Ozone engu-36W / 60W ye-UVC enesilawuli kude esivela eKanfur ingabulala amagciwane, igciwane, izibungu, ingahlangabezana nezidingo zokuvimbela inzalo nokubulala amagciwane empilweni yansuku zonke futhi ivikele impilo yakho nomndeni wakho.
36W / 60W UV magciwane isibani nge-wireless elawulwa kude
I-110 V / 220 UV isibani sokubulala amagciwane isilawuli kude esingenantambo odongeni, isikhathi sesithathu segiya, ukubambezeleka kwemizuzwana eyi-15 ukuqala ukuvikela umzimba wakho. Isibani se-UV ozone disinfection, inzalo eyisiyingi, hlukana negciwane kanye namagciwane.
isibani sokubulala amagciwane se-ultraviolet sokukhipha amagciwane egumbini
Isibani sokubulala amagciwane se-Ultraviolet singaqeda amabhaktheriya, igciwane kanye nezibungu, esisetshenziswa kakhulu eKhaya, eSikoleni, esibhedlela, eHhotela, esibamba iqhaza elibalulekile ekubulaleni amagciwane empilweni yethu yansuku zonke.
36W ephathekayo 254nm Ozone uvc disinfection lamp
Isibani sokubulala amagciwane se-UVC sisiza ukubulala amabhaktheriya, ama-virus, ama-allergen, nokubumba kahle. Kuyindlela yokukhucululwa kwendle engenamakhemikhali efaka amagciwane ku-360 ° ukusiza ukudala indawo yokuhlala ephephile kalula.
Ikhaya le-36W Germicidal uv light disinfection
Ukukhanya okuyi-110V / 220V kwe-germicidal UV okuvela eKanfur kuvumela ukukhanya kwelanga kungene egumbini, ngemisebenzi yokuqeda amagciwane, ukuvala inzalo kanye nezibungu kususe, kukulethela indawo yokuphila enempilo.
Ukukhanya okusha kwe-35W UV kwe-disinfection ukukhanya kwenzalo yasendlini
Thina uKanfur sisanda kuklama isibani esisha se-35w UV sokukhipha amagciwane, nge-Aluminium alloy bracket, igobolondo le-ABS, i-UV ne-ozone inzalo ephindwe kabili, kwakha indawo enempilo yasekhaya.
Isibani esiphathwayo se-ultraviolet isibulali magciwane
35W isibani esivimbela inzalo se-UV, i-UV Enamandla ne-Ozone zihlangana
gcoba umoya nobuso ngaphakathi kwegumbi ekhaya noma endaweni yokusebenza.
Ikhwalithi yokuqala, ubuqotho kuqala
Igumbi 102, iQuanshan Mining Science Park, idolobha iXuzhou, esifundazweni iJiangsu, eChina 221000